Raheem Sterling oo la guddoonsiiyay abaal marinta laacibka sanadka Premier League ee FWA – Gool FM
Raheem Sterling oo la guddoonsiiyay abaal marinta laacibka sanadka Premier League ee FWA
Byare May 10, 2019
(England) 10 Maajo 2019. Ka hor kulanka axada ay Manchester City ku xaqiiqsaneyso hanashada horyaalka Premier League, Raheem Sterling ayaa la guddoonsiiyay abaal marinta laacibka sanadka Premier League ee FWA.
Kooxda Guardiola ayaa axada ku qasban inay la timaado natiijo la mid ah tan Liverpool si ay ugu guuleysato horyaalka, waa inay adkaadaan haddii ay Reds ka adkaato Wolves, haddii ay bar-baro labada dhinac wada galaan sidoo kale Man City ayaa koobka qaadi doonta.
Raheem Sterling ayaa loo magacaabay laacibka sanadka ee da’yarta Premier League PFA kaddib markii uu Van Dijk ku guuleystay abaal marinta sare.
Yeelkeede, Xiddig reer England ayaa nasiib u yeeshay inuu ku guuleysto laacibka sanadka ee FWA oo ay so bixiyaan ururka qoraayaasha kubbada cagta.
Sterling oo soo qaatay kal ciyaareed qurux badan ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay abaal marinta la guddoonsiiyay isla markaana ay dareen fiican tahay in la aqoonsado bandhigaaga.
Nikita Parris ee u ciyaarta kooxda haweenka Man City ayaa iyana ku guuleysatay laacibadda sanadka ee FWA.
Nolol Faqri ah ayuu ku soo koray, Aabihii wuxuu ahaa Timo-Jare....(Ka bogo Qisada Geesigii Tottenham u soo saaray Champions League markii ugu horreysay Taariikhda)+SAWIRRO
RASMI: Lucas Moura oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga isbuuca ee Champions League